A na - akpọkarị obsidian na - acha edo, sheen obsidian, sheen obsidian, vidiyo
A na-akpọkarị shei obsidian na-acha ọla edo ma ọ bụ sheen obsidian bụ okwute ndị nwere ikuku gas, na-esite n'osimiri lava, kwekọọ n'usoro ndị e mepụtara ka okwute a wụrụ awụ na-aga tupu iju oyi. Ihe ndị a na-egosipụta mmịpụta dị ka sheen ọla edo.
A na-ahụkarị ọla edo na-acha uhie uhie bụ iko na-eme ka ọkụ na-acha uhie uhie guzobere dị ka nnukwu igneous rock
A na-emepụta ya mgbe ugwu dị larịị sitere na ugwu mgbawa na-ajụ ngwa ngwa na uto kristal dị obere. A na - ahụkarị ya n'akụkụ nke mmiri rhyolitic lava a maara dị ka mmiri obsidian, ebe ihe ndị mejupụtara kemịkalụ, ọdịnaya silica dị elu na - akpata viscosity dị elu nke, mgbe ngwa ngwa jụrụ, na - emepụta iko sitere n'okike. Ihe mgbochi nke atomic mgbasa site na akwa viscous a na-akọwa enweghị ụkọ kristal. Golden obsidian siri ike, ihe na-agba agba, na amorphous, ya mere ọ na-agbaji ya na ihu dị oke nkọ. N'oge gara aga, ejiri ya rụpụta ihe ịkpụ na ịkpụpu ya, ọ na-ejikwa ya nnwale nnwale dịka ọnya ịwa ahụ.
A ịnweta-dị ka
Ọ bụghị ezigbo ịnweta n'ihi na dị ka iko ọ bụghị nke kristal, na mgbakwunye, ihe mejupụtara ya dị oke agbanwe na a ga-ekewa ya dị ka mineral. Mgbe ụfọdụ, a na-ewere ya dị ka ebe a na-egwu ọla. Ọ bụ ezie na obsidian na-acha odo odo na-achakarị acha, dị ka nkume mafic dị ka basalt, ihe ndị mejupụtara obsidian na-adịkarị mma. Ihe mejuputara Obsidian bu ihe kariri SiO2, silicon dioxide, dika 70% ma obu karia. Nkume dị egwu nke nwere ihe mejupụtara obsidian gụnyere granite na rhyolite. N'ihi na a na-ahụ conidian n'ụwa nke ụwa, ka oge na-aga, iko ahụ ghọrọ kristal na-edozi nke ọma, ọ nweghị ihe a chọtara obsidian nke tọrọ Cretaceous. Mbibi nke obsidian na-eme ngwa ngwa site na ọnụnọ nke mmiri. Inwe mmiri nwere mmiri dị ala mgbe etolitela, nke na-erughị 1% mmiri site na ibu, obsidian na-eji nwayọọ nwayọọ na-agba mmiri mgbe ekpughere ya na mmiri dị n'ime ala, na-akpụ akpụ.
Spidian gbara okirikiri